Umqhubi wePing G2 wayekhe waba ngumqhubi othandwa kakhulu kwigalufa. Namhlanje, kusezinye amaxesha kubonwa kwiiglasi zegalufa nakwiivenkile zegalufu ezixhomekeke kwizixhobo zesekondari. I-Golf yePing ayisenzi umqhubi, owaqala ngo-2004. Ngo-2005, ngokwePing, umqhubi we-G2 wayengumqhubi othengisa kakhulu kwiimarike kwiinyanga ezisibhozo ngaphandle kwaloo nyaka.
I-Ping G2 yagqitywa ekugqibeleni kwePing ngumqhubi we- G5 , owaphuma malunga nonyaka owodwa emva kweG2.
(Ewe, i-G2 yaqalisa umndeni wokuqhuba umqhubi we-G-series ohamba phambili.)
Inqaku lethu langaphambili malunga nomqhubi wePing G2 ubonakala ngezantsi. Kodwa kuqala ...
Ukuthenga umqhubi wePing G2 namhlanje
Umqhubi wePing G2 usenokufumaneka kwiimarike zesekondari. Enyanisweni, maxa wambi ikhona kwi-Amazon.com ithengiswa nguPing ngokwayo.
Ukuba uceba ukuthenga okanye ukuthenga umqhubi wasePing G2 osetyenziswayo, sincoma ukuba ukhangela kwi-PGA Guide Guide kuqala ukujonga ixabiso langoku.
Iqendu leNgcaciso: I-Ping G2 Umqhubi ukuya kwisiqalo sokukhawuleza
Inqaku lethu langaphambili kumqhubi wePing G2, ebhaliweyo ngexesha lokukhutshwa kwebhula, lishicilelwe okokuqala ngo-Agasti 11, 2004, kwaye lu landela apha:
Umqhubi wamva ku-Ping, uG2 wakhe umqhubi, waziswa kubadlali be-Ping's Tour ngoJulayi. Yaye iya kuqala ngokukhawuleza.
Kwinyanga nje kamva, umqhubi wePing G2 usetyenziswe nguMarko Hensby ukuphumelela i-PGA Tour uJohn Deere Classic , ngamaphuzu e-DA kwiNdwendwe yeSizwe yoTyelelo , kunye noKaren Stupples kwi- Women's Open Open win.
Kungekudala, umqhubi wePing G2 ufumaneke kuthi sonke.
I-Ping G2 umqhubi uhlola kwi-460cc, yenziwe nge-titanium kwaye ibonisa inkqubo yangaphakathi yokunciphisa elinciphisa i-spin iphinde iqalise ibhola ephakamileyo ukuze ibone umgama kunye nokuchaneka. Ngokutsho kwePing, abadlali abaninzi beTyelelo, kuquka u-Hensby, bafuna umvuzo wemali yee-10-15 iiyadi.
Kwakhona, u-Ping uthi, ukuphendula ngokufanelekileyo kumfanekiso womqhubi omtsha.
"Ubukhulu bayo kunye nomzuzu ophezulu we-inertia kwenza ukuba ngumqhubi wethu oxolelayo ," kusho uYohn A. Solheim, uSihlalo kunye ne-CEO yePing. "Ukuyila nokubunjwa kwenza ukuba kubonakale kuncinci kunabo. Abadlali abatyeleli baye bathetha ngeembonakalo zabo besithi akabukeli njengomqhubi we-460cc.
"Ngaphezu koko, kunesandi esikhulu esinika i-golfer ivakalelo lombutho eyazi ukuba zenze uqhagamshelwano olunzulu."
Izixhobo ezine ezikhoyo zifumaneka kwi-460cc version (7, 8.5, 10 no-11.5 degrees) kunye neentlobo ezintathu (i-Ping TFC100D, i-Aldila NV 65 ne-Grafalloy ProLaunch 65), kwi-R, S kunye ne-X flexes, ziyafumaneka.
Ukongeza kwi-460cc version, amadoda kunye nabasetyhini abanezantya zokukhawuleza ezinokukhawuleza bangakhetha i-400cc, i-15.5-degree degree loft yeG2. Le ngcaciso encinci ikhethwe i-G2 EZ (i-slow swing speed men) ne-G2 Ladies.
"Iinguqulelo eziphakamileyo zivuyisayo," kusho uSolheim. Intloko ye-400cc kunye neloft enkulu ayizange ifumaneke kubagadi begalufu ngaphambili. Xa ihambelana ne-shaft flex, idibanisa eya kubonelela ngeenzuzo ezinkulu kubadlali begolfu ngokukhawuleza.
Ukuthunyelwa ngaphandle kwe-US kwaqala ekuqaleni kuka-Agasti 2004.
Umqhubi wePing G2 uya kufumaneka e-US kuqala ngoSeptemba 2004.
Iimvumi: Abaxhasi baxhoba amaxhoba ngokukhala umntwana
Iingcebiso eziNcedo zokuKhutshwa kwiKholeji
Iimvavanyo zeMichiza ezilula zoKutya